Amerika Latina · Febroary, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Febroary, 2010
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Febroary, 2010
Shily 28 Febroary 2010
Fanta-daza noho ireo sary sokitra Polyneziana izay manintona mpizahantany manerantany ny Nosin'ny Paska. Fantatra amin'ny anarana napetraky ny mponina ao ho Rapa Nui moa ity anatin'ny zaratanin'i Chili ity, izay any amin'ny 3500 km andrefan'ny kaontinantan'i Amerika atsimo ary manana mponina maharitra manakaiky ny 5000. Taorian'ny horohorontanin'ny 27 febroary moa...
Santiago taorian'ny horohorontany nopihan'i pviojo CC-By Koa satria moa efa hadiva hilentika ny masoandro dia nitombo isa ireo lahatsary mitantara ny horohoroontany nahatratra 8,8 izay nihatra tamin'i Chili tamin'ny 3:30 maraina. Koa satria moa tsy ny tanibe ihany no nisian'izany hetsiky ny tany izany dia niteraka onjan-dranomasina vaventy (tsunami) izay...
Horohorontany manana herim-pihetsehana 8,8 amin'ny refy Richter no nandona ny faritr'i Maule tamin'ny 3:34 maraina tany an-toerana any Chili io. Heno hatrany an-drenivohitra Santiago izay 325km miala ny ivony ny hetsiky ny tany. Betsaka ny fahasimbana manerana ny firenena, ary mitombo isa araka izany ihany koa ny niharam-boina. Mbola re...
Cartagena: Lahatsary iray isan'andro avy any Kolombia
Kolombia 25 Febroary 2010
Androany avy any Cartagena any Kolombia: Voalahatra ho ao anatin'ny Lovan-kolontsaina manerantanin'i UNESCO sy toerana be mpitsidika indrindra no itondranay anareo anareo hianoka amin'ny alalan'ny lahatsarin' ( video) izany tanàna izany izay amoahana iray isan'andro mandritra ity taona 2010 ity.
Però: Sekoly Ambony vaovao ho an'ny mpianatra tena sangany
Però 22 Febroary 2010
Tany amin'ny fanombohan'ny taona 2009 tany ny filoha Peroviana Alan García no nanambara ny fananganana ny Sekoly Ambony Filohan'i Però [es] aorina any Huampaní, tokony ho 25 km atsinanan'i Lima (renivohitra). Tetikasam-panabeazana (mitady voninahitra) hampidirana ny mpianatra 500 mahay indrindra avy amin'ny sekoly 47 tsara indrindra manerana ny firenena izy...
[Podcast] Fanadihadina niarahana tamin'Fabiano Angelico momba ny Transparência Brasil
Brezila 15 Febroary 2010
Mpandrindra ny tetikasan'ny Transparência Brasil (Brezila Mangarahara) i Fabiano Angélico. Ny toha-pikarohana nataony hahazoany diplaoma dia ahitana ny hoe “Ny fangaraharana, ny comptabilité ary ny ady amin'ny kolikoly” izay nataony tao amin'ny Anjerimanontolon'i Chili. Eo am-pakana ny Master ao amin'ny fitantanam-panjakana ao amin'ny Fundação Getúlio Vargas any São Paulo, Brezil izy amin'izao fotoana izao.
Costa Rica: Rantin-tsary nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena
Costa Rica 14 Febroary 2010
Nanokana rantin-tsary [es] momba ny fifidianana notontosaina tamin'ny 7 febroary 2010 teo ka nahalany an'i Laura Chinchilla ho vehivavy voalohany ho filoha teo ny vondrona mpaka sary Kostarikana antsoina hoe “Nomada Colectivo” (Vondrona Mpivezivezy). Nanaraka ny arabe ity vondrona ity hipika ny zava-nisy nandritra ny androm-pifidianana. Saripika avy amin'ny Vondrona...
Brezila: Rakitsary Campus Party 2010
Brezila 13 Febroary 2010
Lasa Ambohipihaonan'ny mpankafy, manampahaizana ary mavitrika amin'ny resaka aterineto i São Paulo tamin'ny volana lasa teo, nandritra ny Fihaonan'ny Anjerimanontolo (na Campus) Breziliana. Nisy fihaoana momba ny LAN, ny teknolojia, ary ny kolontsaina nomerika tao nanombokany 25 ka hatramin'ny 31 janoary 2010. CampusPartyMT [pt] moa dia iray amin'ireo bolongana nitatitra...
Sary mihetsika: Antso vonjy ho an'i Perou Atsimo tratran'ny tondra-drano
Però 01 Febroary 2010
fahatezeran'i rio urubamba avy amin'i Carlos Jose Rey ao amin'ny Living in Peru, nahazoana alàlana Nahatonga ny mponina any Cusco sy ny manodidina azy any Perou hihetsika handefa sarimihetsika tamin'ny web ny trangam-pahamehana misy any aminy, miezaka izy ireo hanaitra ny fampahalalam-baovao rehetra hijery ny loza iainan'ireo mponina any an-toerana...